Cinnamon - fananana medikaly
Zavamaniry dia hazo matevina, ny soavaly maina ampiasaina amin'ny sakafo toy ny zava-manitra. Ankoatra ny fofona sy ny tsiro mahafinaritra, ny sinola koa dia manana ny fanafody, ampiasaina amin'ny fanafody sy ny cosmetology. Diniho ny fomba mahomby sy malaza amin'ny fampiasana cinnamon ho fitsaboana.
Karazana voankazo mahavokatra
Ny cinnamon dia misy menaka iankinan'ny aina, tapa-damba, fibre fitaratra, asidra, vitamina A, C, E, B, K, PP, beta-carotene, mineraly (calcium, potassium, magnesium, phosphor, vy, varahina, sns). Noho ny sangan'asany, manana cannamon ireto toetra manaraka ireto:
antidepressive ary ny hafa.
Ny fitsaboana ny cinnamon diabetes mellitus
Ny toetra manasitrana cannamon dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana diabetika karazana 2 . Ny fikarohana dia naneho fa ny kanelina dia misy tsiranoka izay tsy fantatry ny vatana ho toy ny insuline, fa miasa toy izany ihany koa. Noho izany, ny kanelina dia afaka manitsy ny tahan'ny siramamy ao amin'ny rà, ary mampitombo ny asan'ny insuline sy ny fahafahan'ny sela mandray sy mampiasa glucose. Ny olona mijaly noho ity aretina ity, dia asaina manampy ny kanelina ho solon'ny sira amin'ny sakafo.
Azonao atao koa ny mampiasa ity fomba manaraka ity: misy menaka kely misy ranom-boasary mandoaka rano fisotro madio ary avelao hijanona mandritra ny antsasak'adiny, ary ampio ny 2 teaspoona amin'ny tantely. Io zava-pisotro io dia tokony ho levona indroa isan'andro - ny maraina eo amin'ny vavonin'ny vazivazy ary alohan'ny handehanana manda lelafo.
Cinnamon avy amin'ny tsindry
Ny kanelina dia afaka mampidina ny tsiranoka ary azo ampiasaina amin'izany. Azo atao ny maka ny kyfir fitaratra amin'ny alina, izay ahafahan'ny rongony siramamy, mandritra ny 10 andro. Ilaina ihany koa ny manampy ity fanasam-be amin'ny sakafo isan-karazany.
Io fofona mampangotraka io, mampitombo ny fifanakalozana siramamy ao amin'ny vatana, manakana ny fihenan'ny voambola, ary, noho izany, ny fametrahana fatim-bola. Ireo dokotera, ireo sakafo ara-pananahana, dia manoro hevitra ny mampiditra azy amin'ny sira, ronono, rano, serealy, fofona avy any an-trano ary sakafo hafa (fa tsy mahandro sakafo sy poti-tsakafo, izay tsy manampy amin'ny fahazoana lanjany na dia miaraka amin'ny cinnamon) aza.
Ny fisotroana tena tsara ho an'ny fahavoan'ny lanjany dia ny dite maitso miaraka amin'ny cannamon , izay, ankoatra izany, dia misy vokany matevina. Noho izany, ao anaty kaopy misy dite maitso, add a half teaspoon of cinnamon and honey. Ampiasao isan'andro ity fisotroana ity.
Saingy ilay fomba fikarakarana fofona matsiro mahatsiravina miaraka amin'ny kanelina, izay antsoina hoe "modely ho an'ny sakafo": ao anaty vera misy jogora veromanitra dia manisy antsasakadiny misy teôlôpina sy siramamy, ary koa mofomamy mena (eo amin'ny tendron'ilay antsy). Mila misotro an'io tapakila maraina io alohan'ny sakafo, na oviana na oviana, hanolo azy ireo amin'ny sakafo maraina, ary koa ny hariva amin'ny sakafo hariva.
Cinnamon avy amin'ny cellulite
Ny sinema dia mahomby ihany koa amin'ny ady amin'ny "pensa mainty". Izy io dia mavitrika ny metabolismana ao amin'ny hoditra, mitondra anjara amin'ny fanesorana fatim-be loatra. Ny voankazo ihany koa no mamelona, ​​mamerina sy manefa ny hoditra, mampitombo ny elasticité.
Mba hanafoanana ny cellulite, dia afaka manao akora vita amin'ny kanelina sy tanimanga ianao. Mba hanaovana izany, dia asio 20 grama vita amin'ny tanimanga sy tanimanga manga, ampio 5-6 dipoaly amin'ny solika anti-cellulite (ginger, orange, patchouli na hafa) ary avelao ny rano mafana mandra-pahitra. Apetraho eo amin'ny faritra ny olana, aforeto ny sarimihetsika, ataovy amin'ny akanjo mafana sy manda eo ambanin'ny bodofotsy mandritra ny 40 minitra. Avy eo dia misaraka amin'ny rano mafana, avy eo mafana. Tokony haverina isaky ny iray volana ny fikarakarana isan'andro.
Saron-tavoahangy misy kanelina
Recipe iray amin'ny saron-koditra mahasalama sy mampitony izay manatsara ny endriky ny karazana hoditra rehetra: manamboara ranom-boasary iray avy amin'ny ampahatelon'ny banana iray, siramamy roa mena, antsasakadiny misy kanelina ary ranom-boankazo kely sotro. Apetaho amin'ny endrika mandritra ny 15 minitra, ary sasao amin'ny rano mafana.
Zavamaniry ho an'ny fitomboan'ny volo
Ny solika ho an'ny volom-borona: ampio menaka roa misy menaka voanio siramamy misy siramamy misy tantely sy tantely, mifangaro ary mihatra amin'ny volo, mihosotra ao amin'ny fakany; miala aorian'ny 15 minitra. Amin'ny fampiharana an'io sarontava io 1 - in-2 isan-kerinandro, dia tsy vitan'ny hoe hampiakatra ny fihomboan'ny volony fotsiny ianao, fa koa hanatsarana azy ireo.
Lamban-java-trondro - fananana medikaly sy fanoherana
Inona no manampy trondro fanindroany amin'ny vodka?
Tsimicifuga - toetra
Ny fitsaboana ny aty amin'ny fanafody volom-bahoaka
Tavolga - toetra mahasoa sy fanoherana
Fitsaboana amin'ny ararika
Propolis - fanoherana
Volon'omby - tsara sy ratsy
Tombom-pinoana ara-panahy - Propy medikaly sy ny fanoherana
Inona no ilaina amin'ny voa lela?
Nahoana ny lehilahy no tsy tia tovovavy?
Fofona ao an-dakozia
Ny fomba hikarakarana hyacinth - fitsipika tsotra ho an'ny fambolena ao an-trano
Dresses amin'ny antoko 2013
Balanoposthitis amin'ny ankizy
Ary ahoana raha: kintana 9, izay "nanandrana" ny fenitra vaovao momba ny hatsarana!
Voa voajanahary - Tranonkala mahasoa sy mifanohitra
Hatraiza ny haavon'ny vehivavy iray?
Fitrandrahana ny dite ho an'ny tafo
Toeram-pisakafoanana mandritra ny fahavaratra
Conjunctivitis amin'ny ankizy
Japoney Style Kitchen
Totozy akoho hena
Lasagna miaraka amin'ny broccoli
Vitaminina inona avy no misy ao anaty tongolobe?
Ahoana no handoavana ny lanjany taorian'ny fialantsasatra?
Acetone amin'ny ankizy
Nofaritan'i Angelina Jolie ny fonon'ny Harras's Bazaar
Voankazo tongolo gay